2020-04-06 @ 20:38 in Ankapobeny
Tsingerintaonan'ny Raiko, niantso azy aho, niarahaba azy tamin'ny "Joyeux anniversaire", tahaka ny tsy mandre izy: "Ahoana tsara?". Tany amin'ny fanintelony nanao izany izy vao niarahaba azy tamin'ny teny malagasy... na niara-niteny tamin'ny teny malagasy izahay hoe "arahaba nahatratra ny tsingerintaona".
Mety ho tsy dia misy dikany aminao mpamaky izany raha tsy itantarako ianao. Taona 1981, nanomboka notereny hianatra taranja frantsay amin'izay aho rehefa nanomboka nianatra tamin'ny SAFF (Sekoly Ambaratonga Faharoa Fototra). Sekolim-panjakana tamin'izany fotoana izany. Tamin'ny ambaratonga fototra aho nianatra tamin'ny sekoly tsy miankina mirona amin'ny fivavahana kristiana protestanta. Boky taranja frantsay ho an'ny taona fahafito no nampianarina ahy.
Tamin'izany fotoana izany, tapakandro ihany no mankany an-tsekoly ny mpianatra miankina amin'ny fanjakana. Teny frantsay henjana dia henjana ho ahy no nampianarina tamin'izany. Nivadika tampoka na hoe sarotra tampoka ho ahy izany. Saiky hanohitra aho hoe tsy ampianarina anay any am-pianarana ny zavatra ampianarina anay, saingy tamin'izany nasiaka izy. Efa nihevitra sahady izy fa ho taranaka atao sorona izahay amin'ny fampianarana teny malagasy ranoiray. Tsy hisy handray mpiasa tsy mahay teny frantsay izany, hoy izy... Tsy mba tao anaty fiheverana izany hoe mba mety hanangana asa na hahaleo tena fa dia efa ampidirina an-doha sahady fa ho mpiasa. Ranomaso tsy ranomaso ny ahy tamin'izany satria sady miambin-trano, tsy mivoaka ny trano, no mianatra. Nitohy hatramin'ny taona faha-8 izany fianarana taranja frantsay fotsiny izany rehefa ao an-trano. Nampidirina tao amin'ny CCAC ihany koa aho mba hamaky boky teny frantsay betsaka.
Nisy vokany ihany izany rehefa afaka fanadinana BEPC tamin'izany (tsy tadidiko intsony ny fanoratra ilay CFEPCES) ka nianatra tao amin'ny Lycée Ampefiloha. Teny frantsay ranoiray sahady ny fampianarana ankoatra ny taranja malagasy. Gaga ny mpianatry ny St Michel fa mba mitovy haavom-pahaizana tamin-dry zareo ihany aho raha teny frantsay. Hatreo ihany aloha ny holazaiko... Fa tena tsara raha ampianarina any an-trano ihany ny ankizy indrindra amin'izao fihibohana izao.
PS: Nanomboka tamin'izaho tanora ihany koa no nanomboka nivoady tao anatiko tao aho fa hitozo mafy amin'ny fianarana teny malagasy, handala araka izay azo atao izany taranja izany... ary rehefa afaka BACC dia niditra indray tamin'ny fianarana teny anglisy ho fihaikana ilay taranja frantsay ihany... izay indro entiko mandraka androany io.